Semalt: 10 Ngwá Ọrụ Ndị Dị Nlereanya nke FMiner, Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Dị Ike
FMiner bụ ngwá ọrụ dị ike na nke bara uru iji kpochapụ weebụsaịtị, ntinye data, ntanetị weebụ ma ọ bụ ntinye aha, nyocha ihuenyo na nkwado macro maka Mac os X na Windows ọrụ. Usoro mmemme a dị mfe iji jikọta atụmatụ ụwa na nhazi ihuenyo.
Ma ị ga-edepụta ọtụtụ ibe weebụ maọbụ nwee ike ịmepụta ọrụ nchịkọta data nchịkwa nke chọrọ nchịkọta ihe nkesa proxy na ndepụta Ajax, FMiner bụ nhọrọ ziri ezi maka gị! Site na mmemme a, ị nwere ike ịchọta ma ọ bụ nchịkọta data na ntanetị na ntanetị weebụ ma dị mfe ịnweta ihe ọmụma sitere na saịtị dị iche iche, dịka ụlọ ọrụ ala, ụlọ ọrụ ntanetị, akwụkwọ ntanetị, akwụkwọ ndekọ, ọnụọgụ ntanetị na ndepụta ngwaahịa.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nke chọrọ nwelite ngwa ngwa, nhazi usoro ihe omume FMiner ga-eme ka ị kọwapụta usoro oge. A na-akọwa ụfọdụ n'ime atụmatụ ya ndị a kachasị elu.
1. Nhọrọ Edetụ Anya
Ị nwere ike ịmepụta arụmọrụ mmepụta data site na iji nchịkọta nchịkọta anya ya ma nweta data achọrọ na ihe na-erughị minit 10.
2. Ọ dịghị Nchọta Usoro
Ọhụụ dị mfe, njirimara na mmekọrịta ya na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịdekọ ọrụ ndị a kpochapụrụ n'enweghị mkpa koodu.
4. Ụzọ ọnụọgụ dị iche iche:
FMiner na-enyere gị aka ịwagharị site na ibe weebụ ma jikọta nnukwu njikọ njikọ, nhọrọ ntinye, URL na ngwa ntinye ngwa ngwa.
5. Isiokwu Ntinye nhọrọ:
Otu n'ime atụmatụ kachasị mma nke FMiner bụ na ị nwere ike ibudata ụkpụrụ ndenye ịchọrọ iji ya mee ihe na ụdị weebụ nke saịtị weebụ Ị nwere ike ịkwadebe ndepụta nke isiokwu ma nyefee ụdị maka mkpụrụokwu dịgasị iche iche
6. Ihe Ndabere Natu:
n'ihi na ọ ga - enwe ike ịmepụta ihe ndị a na - achọpụta na ntanetị na - eme ka ọ bụrụ na ị ga - achọpụta na ị ga -
Ị nwere ike ịmepụta nbudata data site na ngwa ngwa multi-nchọgharị nke FMiner. Ngwaọrụ a ga - eme ka ọ dịrị gị mfe ịkọwapụta ibe gị na Google, Bing, na Yahoo.
8. Ụdị mbupụ:
FMiner na-akwado ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị mbupụ ụdị dịka Excel, CSV, HTML, XML, na JSON Ọ na-echekwa data gị na ọdụ data dị ka MySQL, MS SQL, na Ọhụụ.
9. Nlekọta Captcha:
Jide n'aka na nchekwa gị na intaneti na ịnweta ule Captcha FMiner. Nke a ga-egbochi bọtịnụ na spiders ịbanye na saịtị gị ma bụrụ ọrụ zuru ezu nke captcha ọrụ nke atọ.
10. Ndị nnọchiteanya na Cookies maka Access Anonymous:
Otu n'ime atụmatụ kachasị mma nke FMiner bụ na ọ na-akwado proxies na kuki dị iche iche maka ịnweta ohere. Ọ pụtara na ihe ọ bụla i mere na ịntanetị adịghị edekọ ma adreesị IP gị ka na-ezo.
Naanị ị ga-ahọrọ faịlụ ntanetịpụta na ka FMiner rụọ ọrụ ya. Ọ ga-ewepụ data gị, ma ị nwere ike nyochaa usoro niile arụ ọrụ ahụ. Nhọrọ nhọrọ nke ikpo ọkụ nke FMiner ga-ewebata usoro niile ma jiri usoro map nwere ike iji mmekọrịta na ibe weebụ. Ọzọkwa, ọ ga-enye gị screenshots ka i wee nyochaa àgwà nke data gị. A na-echekwa data FMar na ụdị Excel, SQL ma ọ bụ CSV ma tinye ya na nkọwa Source .